OLI – OLI
Carraa Barumsaa – Biyya Turkii
February 12, 2018 February 12, 2018 OLI
Mootummaan Turkii Sadarkaa barnootaa digrii lammaffaafi sadaffaa ( Maastarsiifi Doktorummaatiin) barsiisuuf carraa Iskoolaarshiippii banaa godheera. Carraa kanatti fayyadamuuf iyyannoo galchuun kan danda’amu Guraandhala 5 – Bitootessa 2 ( february 5 – 2 march) qofa. Kanaafuu namoonni kanaan dura barumsa digrii tokkoffaa ( BA/ BSc) qabdan iyyannoo kana akka galchitan gamanumaan isin yaadachiisuu barbaadna.
Namoota Iskoolaarshiippii kana injifataniif motummaan Turkii nyaata, dhugaatii, mana jireenyaa, inshuraansii fayyaa akkasumas maallaqa kiisaa ( Maastarsiif Liiraa Turkii 700, Doktorummaaf Liiraa turkii 1400) ni kanfala. Iyyannoo galchachuuf hidhata/ liinkii asii gadii kana cuqaasaa.
Carraa Leenjii YALI – EAST AFRICA
February 12, 2018 OLI
Dhaabbanni Young African leadership Initiative damee Afrikaa bahaa dargaggoota Umriin isaanii 18 – 35 ta’an dhimmoota ijoo sadi; Hoggansa Uummataa, Khalaqa Hojii akkasumas Daldala irratti leenjisuudhaaf iyyata baneera. Dargaggoonni dhimmoota sadeen kana irratti fedhii qabdan akka iyyannoo galchitan gamanumaan isiniif dhaamuun barbaadana.
Piroojectiin Young African Leadership Initiative jedhamu Prezidaantii Ameerikaa duraanii Baaraak Obaamaadhaan kan eegalame yommuu ta’u kaayyoon isaa ol’aanaan dargaggoota egeree Ardii Afrikaatiif fayyadan horuudha. Sagantaa kana irratti hirmaachuun carraa of dura gara Waashingtan, Ameerikaa dhufanii leenjilee wal fakkaatoo argachuudhaaf faaydaa guddaa qaba.
Iyyannoo Guutudhaaf Liinkii Asii gadii kana cuqaasaa/ Kooppii godhaatoo google godhaa. Ergasii ‘ APPLY’ isa jedhu tuquudhaan carraa keessan yaaluu dandeessu.